လျှပ်စစ် ဆိုင်ရာ viva အမေးနှင့် အဖြေ ၁၀၀၀ - (၂) - Open Engineering For Myanmar
» လျှပ်စစ် ဆိုင်ရာ viva အမေးနှင့် အဖြေ ၁၀၀၀ - (၂)
လျှပ်စစ် ဆိုင်ရာ viva အမေးနှင့် အဖြေ ၁၀၀၀ - (၂)
မေး-၆။ Energy (စွမ်းအင်) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း?
ဖြေ-၆။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဓိက အကျဆုံး အရာ ၂ ခုရှိပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ matter နှင့် energy တို့ ဖြစ်ကြသည်။ Energy ဆိုသည်မှာ အလုပ်လုပ်နိုင်သော စွမ်းရည်ကို ခေါ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မေး-၇။ Molecule (မော်လီကျူး) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း?
ဖြေ-၇။ matter တစ်ခု၏ ရူပ နှင့် ဓာတု စွမ်းရည်များ အကုန်အစင် ပါရှိနေသေးသော အသေးငယ်ဆုံး အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၄င်းကို ထပ်မံစိတ်ပိုင်းလျှင် atoms များ ရရှိလာမည် ဖြစ်သော်လည်း ရူပ၊ ဓာတု စွမ်းရည်များ မရှိနိုင်တော့ပေ။
မေး-၈။ Atom (အက်တမ်) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း?
ဖြေ-၈။ (molecule) မော်လီကျူးများကို (atom) အက်တမ် များဖြင့် ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက် ထားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အက်တမ်တစ်ခုသည် အသေးငယ်ဆုံး အရာဝတ္ထုဖြစ်သည်။ အက်တမ် သန်းတစ်ရာခန့်ကို အတန်းလိုက် စီထားလျှင် ၁ စင်တီမီတာ ခန့်သာ ရှည်မည် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိရှိ သမျှသော အရာများကို အက်တမ် အမျိုးမျိုး ဖြင့် ပေါင်းစပ် ဖွဲ့စည်း ထားခြင်း ပင် ဖြစ်သည်။
မေး-၉။ (atom ) အက်တမ် တစ်ခုဟာ တကယ်ပဲ အသေးငယ်ဆုံး အမှုန် တစ်ခုလား?
ဖြေ-၉။ မဟုတ်ပါဘူး။ အက်တမ် တစ်လုံးကို လျှပ်စစ် ဓာတ်မ ဆောင်တဲ့ အီလက်ထရွန်တွေ၊ လျှပ်စစ် ဓာတ်ဖို ဆောင်တဲ့ ပရိုတွန်တွေ နဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ် ကင်းမဲ့နေတဲ့ နျူထရွန် တွေ ပေါင်းစပ် ဖွဲ့စည်း ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အက်တမ်တစ်လုံးရဲ့ အလယ်မှာ ပရိုတွန် နဲ့ နျူထရွန် တို့ ပေါင်းစပ်ပါဝင်တဲ့ နျူကလိယ ရှိပြီး ၄င်းကို အီလက်ထရွန်တွေက energy shells အမျိုးမျိုးကနေ ဝိုင်းရံ လှည့်ပတ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး-၁၀။ (Electron) အီလက်ထရွန် ဆိုတာဘာလဲ?
ဖြေ-၁၀။ အက်တမ် တစ်ခုမှာ ပါဝင်တဲ့ သေးငယ်တဲ့ အမှုန် တစ်ခု ဖြစ်ပြီး တစ်ယူနစ် လျှပ်စစ် ဓာတ်မ ဂုဏ်သတ္တိ ရှိတဲ့ အရာကို အီလက်ထရွန်လို့ ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး-၁၁။ (Proton) ဆိုတာဘာလဲ?
ဖြေ-၁၁။ အက်တမ် တစ်ခုမှာ ပါဝင်တဲ့ သေးငယ်တဲ့ အမှုန် တစ်ခု ဖြစ်ပြီး တစ်ယူနစ် လျှပ်စစ် ဓာတ်ဖို ဂုဏ်သတ္တိ ရှိတဲ့ အရာကို ပရိုတွန် လို့ ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး-၁၂။ (Neutron) နျူထရွန် ဆိုတာဘာလဲ?
ဖြေ-၁၂။ အက်တမ် တစ်ခုမှာ ပါဝင်တဲ့ သေးငယ်တဲ့ အမှုန် တစ်ခု ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ် ဂုဏ်သတ္တိ ကင်းမဲ့နေတဲ့ အရာကို နျူထရွန် လို့ ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နျူထရွန်ရဲ့ mass က ပရိုတွန်နဲ့ တူညီလုနီးပါး ရှိပါတယ်။
မေး-၁၃။ (Elements) ဒြပ်စင်တွေ နဲ့ (compounds) ကွန်ပေါင်း တွေအကြောင်းကို ရှင်းပြပါ။
ဖြေ-၁၃။ အက်တမ် တစ်မျိုးတည်း ပေါင်းစပ် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အရာဝတ္ထုကို ဒြပ်စင် လို့ ခေါ်ပြီး မတူညီတဲ့ အက်တမ်တွေ နှစ်ခု သို့ နှစ်ခုထက် ပိုပြီး ပေါင်းစပ် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အရာတွေကိုတော့ ကွန်ပေါင်းတွေလို့ ခေါ်ပါတယ်။
မေး-၁၄။ (radio) ရေဒီယို ဆိုတာ ဘာလဲ?
ဖြေ-၁၄။ ရေဒီယို ဒါမှမဟုတ် ရေဒီယို အသံဖမ်းစက် ဆိုတာ ရေဒီယိုလှိုင်းတွေကို ဖမ်းယူပြီး အသံလှိုင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲ ပေးနိုင်တဲ့ အီလက်ထရောနစ် ကိရိယာ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မေး-၁၅။ (radio waves) ရေဒီယို လှိုင်း ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း?
ဖြေ-၁၅။ frequency 20KHz မှ 3*106MHz အတွင်း ရှိသောလျှပ်စစ် သံလိုက် လှိုင်းများကို ရေဒီယို လှိုင်းများ ဟု ခေါ်သည်။